Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလက်ဆောင်တွေကြောင့် အံ့သြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့ ရက်ပ်ပါ Hanhae - Cele Gabar
Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလက်ဆောင်တွေကြောင့် အံ့သြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့ ရက်ပ်ပါ Hanhae
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin တို့ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းကတော့ အခုအချိန်ထိအောင်လူပြောများနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေကိုပေးခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်တွေကလည်း မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အံ့သြစရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ရက်ပါ Hanhae က SBS ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Hanhae ကတော့ ‘Escape at2Cultwo Show’ မှာတော့ Bin-Jin စုံတွဲရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဧည့်သည်တွေကို ပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ Bin-Jin စုံတွဲကတော့ နာမည်ကြီးဖက်ရှင်နဲ့အလှအပအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ Tom Ford ရဲ့ ရေမွှေး၊ Barnab အမှတ်တံဆိပ်အနှိပ်ခံစက်လေးတွေနဲ့ Baccarat အမှတ်တံဆိပ်ဖန်ခွက်တစ်စုံ ကိုပေးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်တွေကတော့ ကိုရီးယားဝမ်တစ်သန်း (ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၇၈၉ ) ခန်. တန်ဖိုးရှိတာကြောင့် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ငွေဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲနာမည်ကျော်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin တို့နှစ်ဦးကတော့ ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာပရိသတ်တွေကို မင်္ဂလာသတင်းအသိပေးခဲ့ပြီး မတ်လမှာလက်ထပ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲကိုသီးသန့်ကျင်းပခဲ့ကြပြီး မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေကိုတော့ ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲမှာပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်တွေကတင် ပရိသတ်တွေကိုအံ့သြစေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Hyun Bin နဲ႔ Son Ye Jin တို႔ရဲ႕မဂၤလာပြဲလက္ေဆာင္ေတြေၾကာင့္ အံ့ၾသခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းေျပာလာတဲ့ ရက္ပ္ပါ Hanhae
ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ Hyun Bin နဲ႔ Son Ye Jin တို႔ရဲ႕မဂၤလာသတင္းကေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိေအာင္လူေျပာမ်ားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မဂၤလာပြဲကိုတက္ေရာက္တဲ့ဧည့္သည္ေတြကိုေပးခဲ့တဲ့ လက္ေဆာင္ေတြကလည္း မထင္မွတ္ထားေလာက္ေအာင္ အံ့ၾသစရာျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ရက္ပါ Hanhae က SBS ရဲ႕အစီအစဥ္တစ္ခုမွာ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
Hanhae ကေတာ့ ‘Escape at2Cultwo Show’ မွာေတာ့ Bin-Jin စုံတြဲရဲ႕မဂၤလာေဆာင္မွာဧည့္သည္ေတြကို ေပးခဲ့တဲ့လက္ေဆာင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။ Bin-Jin စုံတြဲကေတာ့ နာမည္ႀကီးဖက္ရွင္နဲ႔အလွအပအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္တဲ့ Tom Ford ရဲ႕ ေရေမႊး၊ Barnab အမွတ္တံဆိပ္အႏွိပ္ခံစက္ေလးေတြနဲ႔ Baccarat အမွတ္တံဆိပ္ဖန္ခြက္တစ္စုံ ကိုေပးခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေဆာင္ေတြကေတာ့ ကိုရီးယားဝမ္တစ္သန္း (ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၇၈၉ ) ခန္. တန္ဖိုးရွိတာေၾကာင့္ မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ေငြဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲဆိုတာ စဥ္းစားခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲနာမည္ေက်ာ္ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Hyun Bin နဲ႔ Son Ye Jin တို႔ႏွစ္ဦးကေတာ့ ဒီႏွစ္အေစာပိုင္းမွာပရိသတ္ေတြကို မဂၤလာသတင္းအသိေပးခဲ့ၿပီး မတ္လမွာလက္ထပ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မဂၤလာပြဲကိုသီးသန႔္က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး မဂၤလာပြဲပုံရိပ္ေတြကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြကိုမွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။ မဂၤလာပြဲမွာေပးခဲ့တဲ့လက္ေဆာင္ေတြကတင္ ပရိသတ္ေတြကိုအံ့ၾသေစခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
Posted in International CeleTagged Hyun Bin, International Cele, Rapper Hanhae, Son Ye Jin, Wedding
Previous post အရက်မူးပြီးကားမောင်းခဲ့တာကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံနေရတဲ့ မင်းသမီး Kim Sae Ron
Next post ” ချစ်ရတဲ့ညီမငယ်လေးအတွက် ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိပြီးဆင်ခြင်လိုက်နာရမယ့် အသိတရားတွေကို ပြောပြသင်ကြားခဲ့တဲ့ ဘီလီလမင်းအေး”